Hoggamiyeyaasha reer galbeed halkee qarisa?! | isbeddel
← Masar: Hooyadii adduunkaay!
How to Achieve Real Reform in the Arab World →
Hoggamiyeyaasha reer galbeed halkee qarisa?!
Sidayda, ayaa dad badani waxay u maleeyaan in siyaasiyiinta reer galbeedku markay kuraasta ka degaan barkinta dheeraystaan oo raaxo iyo nasasho galaan. Waayo dib ba indho loogama qaado! Laakiin sidaas maaha, intooda badani waxay wakhtigooda ugu badan ku qaataan Xarumaha Cilmi-baadhista, ganacisga gaarka ah iyo maamulka shirkadaha waaweyn. Way adag tahay in aad aragto cid kuu sheegta meesha ay ku danbeeyeen wejiyo in badan dunida hor taagnaa; xitaa Mudane Google taasi si dhif ah ayaad uga helaysaa! Anigoo sidaas iskaga dhaafay iskana baraad la’, hase ahaatee u arkaya arrin xiiso leh in aan ogaado meesha ay ku danbeeyaan shakhsiyaadka soo mara xafiisyada sar-sare ee maamulka reer galbeed-ku, ayuun baan maalin sii horraysay isha ku dhuftay warbixin kooban oo uu telefishanka al-Jasiira ka diyaariyey arrintan lafteeda kuna daabacay aljazeera.net. Si kooban oo aad u qurux badan ayay u diyaariyeen (waxay u dhigeen qaab Slides ah).
In kooban bal aan ka eegno boqollaalka hoggaan ee laba-guuradii kasta soo mara kuraasta sare ee dalalka reer galbeedka.
· Tony Blair, Ra’iisal Wasaarihii hore ee Ingiriiska, waxa la sheegay in uu bangiga G. B. Morgan ku shaqaaleeyey lacag gaadhaysa Shan Milyan oo dollar sannadkii, si uu u noqdo la taliyihiisa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. Bangiyo kale ayaa sidoo kale isu dayay in ay ku qanciyaan Blair isla shaqadaas in uu u qabto. Sida la og yahayna waa ergeyga gaarka ah ee Qaramda Midoobay u diratay Bariga Dhexe.
· Donald Rumsfeld, Xog-hayihii hore ee labada jeer qabtay jagada Difaaca Maraykanka, waxa uu saami xooggan ku leeyahay shirkadda dawooyinka ee Gilead Sciences, Inc. Waa shirkad lagu xaman jirey in ay ka danbaysay anfariirkii ka yimid xanuunkii loola baxay “Durayga Shimbiraha/Doofaarka”. Waxay shirkaddani soo saartay daawo loo yaqaan ‘Tamiflu’ oo in badan suuqyada galbeedka haysatay, khasabtayna in ay dawlado badani ku soo qamaamaan iibsigeeda. Waa ganacsade raad weyn ku leh suuqa daawooyinka ee adduunka.
· Jacques Chirac, Madaxweynihii hore ee Faransiiska, isla markii uu dabada ka qaaday kursigii madaxtinnimada, waxa uu furay xarun uu ugu magac daray “Xarunta Jacques Chirac ee Horumarinta iyo wada-hadalka xadaaradaha”; waana xubin ilaa weligii ah oo ka tirsan golaha dastuurka ee Faransiiska.
· Gerhard Schröder, Chancellor-kii hore ee Jarmal-ka, waxa isla markii uu xilka ka tagey loo magacaabay madaxa saamileyda shirkadda Gazprom. Gazprom waa shirkadda Ruush-Jarmalka ah ee haysata qandaraaska xidhidda gaaska laga soo jiidayo Ruushka ilaa Jarmalka ‘Nord-Stream ama North European Gas Pipeline’.
· Javier Solana, Xog-hayihii hore ee NATO iyo weliba Golaha Midowga Yurub, waxa uu markiiba ku biiray odayaasha Mac-hadka Brookings ee daraasadaha si uu u noqdo la-taliyaha arrimaha siyaasadda debedda, amaanka iyo horumarinta. Si laxaad leh ayaa loogu soo dhaweeyay mac-hadkaa, waxaanu sheegay Strobe Talbott, madaxa mac-hadku, in uu si weyn ugu diirsaday aqbalaadda Solana ee ka mid noqoshada Brookings Institution.
· Gen. Colin Powell, Xog-hayihii sii horreeyey ee Maraykan-ka, waxa uu xubin istaraatiiji ah ka yahay shikadda Kleiner Perkins Caufield & Byers ee dhinaca tiknoolajiyadda. Xubin istaraatiiji ah waxay ka dhigan tahay in uu yahay qof maalgelin ku leh isla markaana arrimaha gaarka ah ee shirkadda wax laga weydiiyo…Maamulka maalinlaha ah ee shikadda se shaqo kuma leh. Waxa uu sheegaa inuu jecel yahay noqoshada hormood xagga tiknoolajiyadda nadiifta ah “Green technology.
· Condeleezza Rice, Xog-hayihii hore ee Maraykan-ka, waxa ay markiiba muquuratay arrimaha akaadeemiyadda iyada oo noqotay Professor siyaasadda ka dhigta jaamacadda Stanford, isla markaana baadhe sare ka ah Mac-hadka Hoover Institution. Sidoo kale waxay dhex gashay xarumaha ay ka mid yihiin: Carnegie, RAND, Trans associates, Shevron iqk.
· Richard Armitage, Ku-xigeen hore oo Wasaaradda Arrimaha Debedda Maraykan-ka ah, waxa uu haatan madaxa kaga fadhiyaa maamulka shirkadda Transco Ltd, waxa kale oo uu xubin ka yahay Mac-hadka Diblomaasiyadda Maraykan-ka.
· Joseph Nye, gacan yarihii hore ee arrimaha difaaca iyo ammaanka caalamiga ah ee Maraykan-ka, waxa uu haatan Professor ka yahay Jaamacadda Harvard. Dhawr akaaddemiyadood ayuu xubin ka yahay; Akaaddemiyadda Funuunta iyo Sayniska ee Maraykan-ka oo kale.
· Henry Kessinger, Xog-haye sii horreeyey oo Maraykan; ahaana dadkii ugu qoobka cuslaa ee soo mara Maraykan-ka taariikhdiisa dhow, waxa uu maanta u taliyaa shirkadda Kissinger Associates, oo ah shirkad talo-bixineed. Waxa kale oo uu xubin ka yahay Golaha Siyaasadda Difaaca ee Maraykanka iyo weliba Golaha Talo-bixinta Caalamiga ah ee American International Group oo uu madax ka yahay. Meelo kale oo uu xubin sharaf ka yahay ayaa jirta, sida: Guddiga Olambikada ee Dunida iyo American Express.
· José María Aznar, Ra’iisal-wasaarihii hore ee Isbayn, waxa uu cilmi-baadhe xagga hoggaanka toosan iyo maamul wanaagga ah ka ahaa Jaamacadda George Washington University; haatan waxa uu madax ka yahay Mac-had cilmi-baadhiseed oo raacsan Xisbiga Shacabka ee Isbayn.
· Kofi Annan, Xog-hayihii hore ee Qarannada Midoobay, waxa uu isla markii uu New York ka tageyba bilaabay in uu la shaqeeyo ururro Afrikaan ah iyo kuwo caalami ahba. Waxa uu madax ka noqday abaalmarinta Mo Ibrahim (Lacagley Soodaani ah ayaa ku deeqa abaal-marintan) ee la siiyo hoggaamiyaha Afrika ugu wanaagsanaada. Annan waxa uu xubin ka yahay Guddiga Horumarinta Afrika oo la sameeyey 2007-dii si ay indhaha caalamka ugu soo jeediyaan horumarinta Afrika iyo si ay hoggaamiyeyaasha dunida koowad u xasuusiyaan oofinta ballamihii gargaar ee Afrika loo qaaday. Sidoo kale waxa uu la taliye u yahay Jaamacadda Gaana, mid Singabuur ku taalna waxbuu ka dhigaa.
· Al Ghor, Madaxweyne ku-xigeenkii sii horreeyey ee Maraykan-ka, waxa uu aasaasay urur la yidhaa “Is-bahaysiga Ilaalinta Cimilada”; waxana uu si weyn ugu lug leeyahay ganacsi gaar ah. Al Ghor ilaa intii uu ka tagay xafiiska (in kastoo uu ilaa toddobotaannadii ka shaqaynayey ilaalinta cimilada adduunka), waxa uu si firfircoon uga hawl galayey yaraynta sunta hawada lagu sii daayo si looga badbaado khatarta cimilo ee ka dhalan karta.
· Mikhail Gorbachev, Madaxweynihii u danbeeyey ee USSR, waxa uu sameeyey hay’ad caalami ah oo la yidhaa “Hay’adda Bisha Akhtarka ah” taas oo ka dhigtay mid ka mid ah saddexda qof ee sida ugu weyn u ilaaliya shabakadda loo yaqaan “Earth Charter Initiative”, 2001-dii waxa uu sameeyay Isu-tagga Dimuqraadiyiinta Hanti-wadaagga ah ee Ruushka; waxa kale oo uu ka mid yahay dhowr naadi, sida: Naadiga Rooma iyo ka Madriid.
· Yoshka Fisher, Wasiirkii hore ee arrimaha debedda Jarmal-ka, waxa loo magacaabay la taliyaha arrimaha siyaasadda iyo af-hayeenka barnaamijka qasabadaha gaaska ee Nabucco Pipeline, kaas oo ay ku midoobeen dawlado badan oo raba in ay la tartamaan isla markaana jabiyaan ku keliyaysiga Gazprom ee ay ku haysato khadka gaaska loogu soo jiidayo Yurub. Qorshahan ayaa ah mid gaaska lagaga soo jiiday badda Qaswiin ilaa Yurub iyada oo la marinayo Turkiga, Bugaariya, Roomaaniya iyo Jeek-ga; markaa shaqada Fisher waxa weeyi sidii uu dalalkaa ugu qancin lahaa fulinta mashruucan iyo isu dubbaridka midaynta siyaasadaha dalalkaa ee ku aaddan arrintan.
· Brent Scowcroft, la taliye hore oo amniga qaran ee Maraykan ah xilligii Bush kii weynaa, waxa uu noqday la taliye sare oo ka tirsan shirkadda weyn ee GOOGLE, sannadkii hore dhammaadkiisiina waxa uu shirkadda u qaabilsanaa wadahadalladii ay la gashay dawladda Shiinaha. Scowcroft waxa u aasaasay Naadiga Siyaasadda Caalamiga ah, waana mu’asasad danaysa arrimaha guud ee dunida, sidoo kale waxa uu madax ka yahay ‘The Scowcroft Group’ oo ah shirkadda samaysa talo-bixinta xagga ganacsiga adduun-weynaha.
· Philip Gonzalis, Madaxii hore ee xisbiga hanti-wadaagga ee Isbayn 14 sano na ahaa Madaxa Xukuumadda Isbayn, waxa uu haatan Madax ka yahay Mu’asasadda Horumarinta ee Caalamiga, Madriid. Waxa uu ka mid ahaa murashaxyadii ugu dhowaa in ay qabtaan jagada Madaxtinnimada Midowga Yurub sannadkii 1997. Shir Madaxda Yurub yeelatayna waxa loo magacaabay madaxa ka talinta mustaqbalka Yurub, sidoo kale waxa uu ka tirsanaa koox ka kooban sagaal khabiir oo laga codsaday in ay soo falanqeeyaan caqabadaha Yurub hor iman kara tobanka sano ee 2020-2030; iyo sidoo kale fududaynta is dhex galka reer Yurub laftooda.
· Jimmy Carter, Madaxweyne hore oo Maraykan, waxa uu ku caan-baxay xaruntiisa qaabilsan kormeerka doorashooyinka ka dhaca meelo badan oo dunida ah, waxa kale oo lagu xasuustaa heshiiskii Camp David ee Masar iyo Israa’iil; waana tii uu ku qaatay ‘Nobel Peace Prize’-ta. Guud ahaan, Carter waxa uu si mug leh uga hawl galaa nabadaynta dunida.
Ma dhanna oo boqollaal kale ayaa meelahaa isu aasay, laakiin waa tusaale yar oo ka mid ah halka ay raxanka dhigtaan hoggaamiyeyaasha reer galbeeku markay kuraasta ka degaan. Kuweenna (guud ahaan Afrika) ayaan is weydiiyey halka ay ku danbeeyaan, dabadeed waxa ii soo baxday laba mid uun:
1- In ay xabaal ku jiraan oo aanay kaba degin kursiga ee ay ku dhinteen iyaga oo saaran; markaana uu Xadiiskani sida dharkooda ugu maran yahay:
” Addoonka ayaa la keenayaa Qiyaamaha, dabadeed waxa la odhanayaa: Keen amaanadii laguu dhiibtay? “Rabboow, sideen u keenaa ma anigaa dunidiiba jooga” ayuu odhanayaa. Markaasaa la odhanayaa: “Shalawgaa Jahannama dul geeya”, waa la geynayaa waxaana la tusayaa amaanadii oo loo ekaysiiyay sidii maalintii loo dhiibtay; wuu arkayaa garanayaana, dabadeed shalawligii ayaa laga tuurayaa iyaduna way hor cararaysaa, wuu soo qabanayaa haddana way ka siibanaysaa oo wuu daba cararayaa…Sidaas ayuu jirayaa weligii (Amaano xukunka dadka ka weynina ma jirto…Meesha uu dhex car-cararayaana hadda waa Jahannama”; iyo,
2- In ay dunida koowaad ku raqayaan xoolihii ay ka xadeen dalalkooda, markaana ay Maansadii Hadraawi ee “Bulsho” leedahay:
“Ninkii ballankaaga qaaday,
Ka baaqday xilkaad u dhiibtay,
Ka baydhay ujeedadaada,
Ku boobay adoo sabool ah,
Ku wiirsaday baaba’aaga,
Adoo bogan waayay taada,
Ninkii u buseelay raaxo,
Huwaday bulbushii libaaxa,
Buruudkiyo shaashka qaatay,
U booday cirkaa dusheena,
Buurtuu koray waarin mayso,
Heddiisana baajin mayso,
Kub iyo bawduu ka jabi”.
Isagase meel kalaa u cad, wax kalaana u bulaamaya.
Bes. Bal adba mid saddexaad!
Eeg lingaxan: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/377ECE5F-8B1C-459F-8355-BADCBE42E116.htm